Cameron.....: September 2020
ရဟ ဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာ၊ အ ဆိုတာ မရှိဘူး။
အ+ရဟ ဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ပင်
မကောင်းမှုကို မလုပ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်။
အင်မတန်မှ ရိုးသားဖြူစင်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။
အရ ဆိုတာ ကိလေသာရန်သူ၊
ဟ ဆိုတာ ဖယ်ရှားပြီးတာ။
လောဘ ဒေါသ မောဟ စတဲ့ ရန်သူတွေကို
အရ ဆိုတာ သံသရာစက်ဘီးကြီးရဲ့
အရဟ ဆိုတာ ထိုက်တန်သူ။
ပူဇော်အထူးကို ခံယူဖို့ ထိုက်တန်သူလို့
ဒီထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲလေး ကြည့်ဖူးကြပြီးပြီထင်ပါတယ်....။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တီဗီ channel တစ်ခုကလွှင့်ပြီးသွားပြီ...။ ကျွန်မက tube ကနေပြန်ကြည့်တာ အားလုံး (၁၆)ပိုင်းရှိတယ် ညလုံးပေါက်ကို (၁၅)ပိုင်းမှာကြည့်ရင်း တိုက်ပွဲကျသွားတယ် မိုးလင်းခါနီးနေပြီ....။ နောက်တစ်ရက်မှပဲ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကြည့်လိုက်တော့တယ်...။ တစ်ညလုံး လက်ကိုင်ပဝါတစ်ထည်နဲ့ ကြည့်လိုက် ငိုလိုက်လုပ် ရေသောက်လိုက် ရှူးထပေါက်လိုက်လုပ်တာ မနက်လင်းတော့ မျက်ခွံတွေရောင်နေရော..။ အဲဒါနဲ့ရုံးသွားတော့ eye liner ထူထူလေးဆိုးသွားလိုက်တယ် ဟန်ကိုကျနေရော....။ Covid စဖြစ်ကတည်းက အလှမပြင်တာကြာပေါ့ ဒီနေ့တော့ မျက်လုံးကို ခပ်မိုက်မိုက်လေး လိုင်နာထူထူဆိုးပစ်လိုက်တယ်...။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသမီးက Pe mak သရဲကားကတည်းက နာမည်ကြီး သူ့ကားတွေတော်တော်များများကြည့်ဖူးတယ်...။ ပြီးတော့ Brand ငှက်သိုက်ကို မြန်မာစကားပြောပြီးကြော်ငြာသေးတယ်လေ....။ မင်းသားကတော့ "I am fine thank you, love you" "Happy Old Year" " Heart Attack" နဲ့ "Brother of the year" ဆိုတဲ့ကားတွေမှာ နာမည်ရခဲ့တာ..။ နှစ်ယောက်လုံးသရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်...။ ဇာတ်သိမ်းမှာ (၁၅)နှစ်လောက်ချစ်ခဲ့ချစ်သူနဲ့မဆုံလို့ ဇာတ်သိမ်းကို သိပ်မကြိုက်ဘူး....။ ရေရှည်လက်တွဲလာခဲ့တဲ့ သူနဲ့ပဲဆုံစေချင်တယ်....။ နှစ်ရှည်လများ သံယောဇဉ်တွေက နောက်ဆုံးကျတော့ဘာမှမဟုတ်သလို မဖြစ်စေချင်ဘူး...။
မကြည့်ရသေးရင်ကြည့်ကြည့်ပါ ကောင်းတယ်....။ ကျွန်မက you tube မှာ တရုတ်စာတန်းထိုးပဲတွေ့လို့ ထိုင်းစကားနားလည်လို့ အဲဒါပဲကြည့်လိုက်တာ...။ English စာတန်းထိုးနဲ့လဲရှိမှာပါ ရှာကြည့်ကြနော်....။ သာမန်ကြည့်နေကျမဟုတ်တဲ့ Romance အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်....။
My Ambulance isa2019 Thai drama series starring Davika Hoorne, Sunny Suwanmethanont, and Wongravee Nateetorn. It is aired on One31 from September6to October 26, 2019 and has 16 episodes. The series is produced by Nadao Bangkok and directed by Naruebet Kuno.
မှတ်ချက် - ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လကရေးထားခဲ့သောပို့စ်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Cameron at 16:22 No comments:
ဒီတလော ကိစ္စတစ်ခုခေါင်းထဲရောက်ပြီး လူကအလိုလိုနေရင်း အဲအကြောင်းကိုပဲတွေးမိပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်ပြီး လည်ပင်းမှာ တစ်ဆို့ဆို့နဲ့ နင်နေတဲ့ ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တာ တော်တော်ခံရခက်တယ်....။ အစာအိမ်ထဲက gas က အပြင်မထွက်ဘဲ လည်မျိုမှာအလုံးလိုက်တစ်နေတာ အစာစားပြီးတိုင်း အစာတွေက အောက်မဆင်းဘဲ လည်ပင်းမှာရှိနေတာ နင်နေတာမျိုးလေ....။ Acid reflux in throat အဲလိုဖြစ်တာလေ....။ စိတ်နဲ့ကုရတာ ထင်သလောက်မလွယ်ဘူး.....။ သူများကိုပြောပြ ညွှန်ပြရတာလွယ်သလောက် ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံလိုက်နာဖို့က ခက်ခဲတယ်....။ ဒါပေမယ့် ဇွဲရှိရှိနဲ့တော့ ကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တာချည်းပဲမဟုတ်လား....။ ကိုယ့်စိတ်ကို ဒီကိစ္စကို မတွေးနဲ့လို့ ပြန်ခိုင်းစေရတာကိုပဲ ခက်ခဲနေတာလေ....။ တခြားအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါ ကိုယ်ခံစားနေတဲ့ ဝေဒနာကို ခဏတော့ မေ့ပျောက်သွားတယ်....။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲပူပြီး တစ်ဆို့ဆို့ဖြစ်နေတာကြီးက အစာစားပြီးခဏတော့ ပျောက်သွားပေမယ့် နောက်တစ်နာရီလောက်ဆိုပြန်ပြန်ဖြစ်တာ ...တခါတလေ တစ်ယောက်ယောက်က လည်ပင်းလာညစ်ထားသလိုလို ခံစားရသေးတယ်...အဲလိုချိန်ဆို ခေါင်းတွေလည်းကိုက်လာတယ်....။ ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးလဲ....။ နားထင်ကို ပရုတ်ဆီရည်လေးလူး လည်ချောင်းကိုလည်းလူးပြီး လေထုတ်ကြည့်ဖိုးကြိုးစား တခါတလေ အန်ကြည့်တယ် အစာနဲနဲထွက်သွားရင်နေလို့ခဏပြန်ကောင်းသွားရော...။
ဒီချိန်မှာ ဆေးရုံဆေးခန်းဆိုတာ သွားဖို့မစဉ်းစားနဲ့လေ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကလည်းကြမ်းနေတာ တစ်နေ့တစ်နေ့ပိုးတွေ့လူနာဉီးရေက တိုးတိုးလာနေတာ....။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အွန်လိုင်းမှာစာဖတ်ပြီး ကုရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူး.....။ ကံ စိတ် ဉတု အဟာရနဲ့ပဲ ကြည့်ကြပ်လုပ်ရတော့မှာ.....။ အစာကို နဲနဲဆီပဲစား အစာမကြေတဲ့ဟာတွေရှောင် အပူအစပ် အကြော်အလှော်တွေဖြတ် စိတ်ကိုပူပန်စရာတွေလျှော့ စိတ်ပျော်ရွှင်စရာ ကြည်နူးစရာတွေကိုပဲတွေး စိတ်ဆင်းရဲစရာ ရုပ်ရှပ်ကားတွေ စာတွေကိုမကြည့်မဖတ်ဘူး...။ အိပ်ရေးဝဝအိပ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်နေ ရာသီဉတုအလိုက်နေထိုင် အဲလိုတွေသတိထားလုပ်နေရတယ်...။ မီးဖိုချောင်ကိုဆေးခန်းအဖြစ်အသုံးပြုရာမှာ ကျွန်မ ပျားရည်နဲ့ပန်းသီးရှာလကာရည်ကိုဖျော်သောက်တယ်...။ အဲဒါသောက်ပြီးတိုင်း ခံတွင်းရှင်းအောင်‌ ရေတစ်ခွက်သောက် ပလုတ်ကျင်းပေးတာတော့လုပ်သင့်တယ်...။ သူက အက်ဆစ်ဓါတ်ပါတော့ သွားကြွေလွှာတွေကို မထိခိုက်အောင် သတိထားရတယ်....။ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်း သတိရှိနေရတာဟာ ဝိပဿနာရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အခြေခံအရင်းမြစ်တစ်ခုပဲ....။ ဒီလိုဝေဒနာကို ခုမှခံစားဖူးတာမဟုတ်ဘူး အရင်တခါကလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်...။ အဲတုန်းက ဒီပို့စ်မှာ ရေးခဲ့ဖူးသေးတယ်....။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ soul mate က ဆေးဝါးလောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးပြီး ဆေးအကြောင်းအတော်အသင့်နားလည်ထားတော့ သူ့ကိုလည်း ကိုယ်ခံစားရတာကိုပြောပြတော့ သူက pantocid (Gastroesophagal Reflux Disease) ဆိုတဲ့ဆေးလေးညွှန်းတယ် အစာအိမ်ဆေးပါပဲ အဲဒါကို အစာစားပြီးတစ်လုံးသောက်တဲ့...။
ကျွန်မ ဝါတွင်းသုံးလ သက်သတ်လွတ်စားဖြစ်တယ် ဒီနှစ်.....။ သက်သတ်လွတ်ကို ဘာဟင်းတွေချက်စားဖြစ်လဲလို့ အရင်လို နောက်နေ့ငါဘာစားမယ် ဘာချက်မယ်လို့ ကြိုမတွေးဖြစ်တော့ဘူး အိမ်မှာရှိတာ သက်သတ်လွတ်ချက်လို့ရတာရှိရင် ချက်စားလိုက်တယ်....။ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဉပုသ်စောင့်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတရားကိုနာတော့ အဲအသိလေးတစ်ခုရသွားတယ်....။
Posted by Cameron at 17:18 No comments:
ဒီနှစ်ကျွန်မအတွက် နောက်ထပ်မိုးရာသီ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ရွှေမှုန်နဲ့ရွှေထူးတို့မောင်နှံနှစ်ယောက် ဆိုထားတဲ့ ''မိုးစက်များကပြောသော''..... ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပဲ....။ ဒီသီချင်းလေးက MV ထွက်ထားပြီးသားပါ...။ ကျွန်မ သူတို့ MV ထဲက ရန်ဖြစ်တာကိုမကြိုက်လို့မတင်ဘဲ အရုပ်မပါတာတဲ့ သီချင်းကိုပဲတင်ပေးလိုက်တာပါ...။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ရွှေထူး Fan တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး သူ့သီချင်းတွေကို အရင်စထွက်ကတည်းက လူငယ်တော်တော်များများနားထောင်ပြီးပေါက်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ နေ့စဉ်နားထောင်နေကျ အနှစ်သက်ဆုံးသီချင်းထဲမှာ တခါမှမပါခဲ့ဖူးဘူး (Y-zet တို့နဲ့ featuring ဆိုထားတာကလွဲရင်).....။ ခုသီချင်းလေးကကောင်းပါတယ် ခပ်အေးအေးလေးနဲ့ ခုလိုမိုးတဖျောက်ဖျောက်ကျတဲ့အချိန်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ လွမ်းဆွေးစရာ စာသားတွေနဲ့.....။ ရွှေမှုန့်အသံလေးက နားထောင်လို့ကောင်းသားပဲ သီချင်းဆိုတတ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူး....။ သူ့ဇာတ်ကားတွေကိုတော့ အများကြီးကြည့်ဖူးပါတယ်....။ သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတယ် ငယ်ငယ်လေးနဲ့....။
ဒီသီချင်းလေးနားထောင်တော့ ကျွန်မရေးခဲ့ဖူးတဲ့ "Black Coffee" တို့ "အနက်ရောင်မိုးကောင်းကင်" တို့ကို သွားသတိရမိတယ်...။ အဲဒီအက်ဆေးလေးတွေနဲ့ဒီသီချင်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လေ....။
မိုးရေထဲမှာထီးအတူဆောင်း နှစ်ယောက်လုံး စိုရွှဲကာချစ်တုန်း
လူကြီးတွေမသိအောင် ဖုန်းတွေပြော မနက်ခင်းတွေအဓိပ္ပါယ်အပြည့်ဆုံး
ဘာတွေမှားယွင်းသွားတာလဲ စဉ်းစားမရပါခက်ခဲ .......... 🎼🎵♬
အရွယ်ရောက်စ ငါ့နှလုံးသားဟာ နင့်အပေါ်နစ်လာပါရော အရမ်းချစ်ခဲ့ကြတယ်လေ...
တချို့အချစ်တွေက မှောင်မဲပြီးလှောင်ပိန်းနေလဲ ပျော်ရွှင်တဲ့လူတချို့ကတော့ ယုံဆဲပါ
တချို့အချစ်တွေက ကျန်ခဲ့တယ် ပုံပြင်လို
တချို့အချစ်တွေက ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ ဘဝကိုပျက်လောက်တဲ့အထိ အရာရာပုံနေသလို
ဆုံမှတ်တို့မရှိတဲ့ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းလိုဝေးပြီ ငါတို့ဝေး........ 🎼🎵♬
တခါတလေတော့လည်း သတိရမိတယ် အဆင်ပြေပါမလား စိတ်ပူဆဲ
ဘယ်တော့မှ ထပ်တွေ့ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဝေးပြီ ငါတို့ဝေး 🎼🎵♬
ဘယ်လိုအရာမှ မနှစ်သိမ့်နိုင်ဘူး သေရာပါ ငါအလွမ်းတွေယူ ထွက်သွားလေသူ
တကယ်တမ်းကျတော့ အရေးကြီးတာ နားမလည်မှုနဲ့ နှစ်ဦးသား သက်ဆုံးတိုင်မြဲဖို့ပဲ
တချို့လူတွေအတွက်ကျတော့ first love ဆိုတာကြီးကို ပြန်မကြားချင်လောက်အောင် နားမှာခါးခဲ့ဖူးတယ်
ကော်ဖီဆိုင်ထဲက ပျော်ရွှင်စရာအလွမ်းများ ငါအလွမ်းများ တွေးနေမိတာ တစ်နေ့မှမမေ့သေးဘူး ငါ့မှာ 🎼🎵♬
အပေါ်ယံတွေကြား နင်ငိုနေမှာ ငါစိုးတာ ထွက်မသွားဖို့တားချင်ပေမယ့်
ဝါခေါင်လပြည့်နေ့သည် မေတ္တာအခါတော်နေ့ ဖြစ်လေသည်။ အခါတစ်ပါး၌ ရဟန်းငါးရာတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံမှ ကမ္မဌာန်းတောင်း၍ ဟိမဝန္တာနှင့် တစ်စပ်တည်း တည်ရှိသော တောအုပ်တစ်ခုတွင် တရား အားထုတ်၍ နေကြလေရာ ရဟန်းတော်တို့၏ သီလ သမာဓိ ပညာဂုဏ်တို့ကြောင့် နတ်တို့သည် သစ်ပင်များပေါ်တွင် မနေနိုင်ကြတော့ဘဲ မြေပြင်၌ ဆင်းသက်၍ အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေကြရသောကြောင့် သည်းမခံနိုင်တော့သဖြင့် ညဉ့်အခါတွင် ရဟန်းတော်များအား အမျိုးမျိုး ခြောက်လှန့်ပြီး ရောဂါအန္တရာယ် ထူပြောအောင် သမာဓိမရအောင် အမျိုးမျိုး ဖန်တီးကြလေရာ ရဟန်းငါးရာတို့လည်း ဤအရပ်သည် ပဋိရူပဒေသ မဟုတ်ဟု တိုင်ပင်ကြပြီး မြတ်စွာဘုရားထံ သွားရောက်ကာ အကျိုးအကြောင်း လျှောက်ထားရာမှ မြတ်စွာဘုရားက ကိုယ်ခံအဖြစ် မေတ္တသုတ် ဒေသနာတော်ကို ချီးမြှင့်တော်မူလိုက်ရာ မေတ္တသုတ် တန်ခိုးကြောင့် နတ်များက မခြောက်လှန့်တော့သည့်အပြင် ချစ်ခင်မြတ်နိုး အကြည်ညိုတိုးပြီး ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်များဖြင့် စောင့်ရှောက် ကူညီကြသောကြောင့် ရဟန်းငါးရာတို့သည် တစ်ဝါတွင်းဖြင့် အားလုံး ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူခဲ့လေသည်။ ဤတွင် ရဟန်းတော်များ မြတ်စွာဘုရားထံ ပြန်ကြွသွားသည်မှာ ပထမဝါဆိုပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် ရဟန်းတော်များ ဤတောအုပ်ပင် ဒုတိယဝါဆိုပြန်ကြကြောင်း ကျမ်းဂန်များတွင် ပြသဖြင့် မေတ္တသုတ် ဟောသောလသည် “ ဝါခေါင်လ “ ဖြစ်ကြောင်း သိသာလေသည်။ ထို့ကြောင့် အထွတ်အမြတ်ထားသော လပြည့်နေ့ကိုယူ၍ “ ဝါခေါင်လပြည့် - မေတ္တာအခါတော်နေ့ “ ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြလေသည်။
ဤ မေတ္တသုတ်တော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာရေး နယ်ပယ်တွင် အလွန် ခေတ်စား လူသိများသော သုတ်တော် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မေတ္တသုတ်၏ သရုပ်ကို ထုတ်နုတ်ပြီး လေ့လာသူ ကျင့်ကြံသူကား နည်းပါးသယောင်ရှိ၏ဟု ယူဆပေသည်။ အများအားဖြင့် မေတ္တာပို့ခြင်းကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ပြုကြသော်လည်း မေတ္တသုတ်ကို အနက် အဓိပ္ပာယ်နှင့် တကွ အသေးစိတ် ကြည့်ရှု သုံးသပ်ရန်ကား မေ့လျော့နေတတ်ကြလေရာ “ လယ်ထွန်သွား နွားမေ့ “ ဟူသကဲ့သို့ ဆိုဖွယ်ရာ ဖြစ်နေလေသည်။ မေတ္တာဘာဝနာကို ပွားများသူတို့သည် မေတ္တသုတ်ကို စနစ်တကျ လေ့လာ၍ ထို သုတ်တော်က ညွှန်ကြားချက်များကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုအပ်လှပေသည်။ မေတ္တသုတ်တော်တွင် မေတ္တာဘာဝနာ ပွားသူတို့ လိုက်နာရမည့် မေတ္တာမူ ၁၅-ချက်သည် အလွန်နှစ်သက် မြတ်နိုး ကျင့်ကြံဖွယ်ကောင်းသည့်အပြင် စနစ်တကျ မေတ္တာပို့သနည်းများ၊ မေတ္တာပို့သူ၏ စိတ်ထားပုံထားနည်း၊ မေတ္တာဘာဝနာ၏ အပိုင်းအခြား၊ မေတ္တာပွားသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ မေတ္တာကြောင့် ဈာန်ရနိုင်ပုံ၊ ထိုဈာန်တွင် ယစ်မူးမနေဘဲ ထိုဈာန်ကို အခြေခံထား၍ ဝိပဿနာတရားဖြင့် မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် ကျင့်စဉ်များကို အတိုဆုံး အကျဉ်းဆုံး အလွယ်ဆုံး နည်းများဖြင့် လမ်းညွှန်တော်မူထားလေသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ထိုစဉ်က ရဟန်းတော် ငါးရာတို့သည် ဤမေတ္တာသုတ်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မေတ္တာကို အခြေခံ၍ ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်သို့ စံဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေရာ ဤမျှ တန်ဖိုးကြီးမားလှသော သုတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ့်ကြောင့် ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားနေကြပါသနည်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရေးနယ်ပယ်တွင် “ ကရဏိယာ “ ဟူသော မေတ္တသုတ်သံသည် အစဉ်ထာဝရ ပဲ့တင်ဟည်းနေသည်မှာ မှန်သော်လည်း သုံးစွဲသူတို့၏ စနစ်မကျမှုကြောင့် ယနေ့ “ ကရဏိယာ “ သည် တန်ဖိုးရှိသင့်သလောက် မရှိဖြစ်နေသည်မှာ မေတ္တသုတ်နှင့် မကင်းသော ရဟန်းရှင်လူတိ်ုင်း၏ တာဝန် ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် “ တို့သားအဖတစ်စု ပြင်ထိုင်ကြဦးစို့ “ ဆိုသကဲ့သို့ အချိန်မနှောင်းသေးသော ယခုအချိန်၍ ဘာသာရေးနယ်ပယ်တွင် ယောင်ဝါးဝါးနှင့် စခန်းသွားနေသော ကိစ္စရပ်ဟူသမျှကို ရပ်တန်းက ရပ်ပြီး ဟောသူနာသူ ကျင့်သူ ကြံသူတို့သည် တိတိကျကျ မိမိရရလေး စခန်းသွားဖို့ ကောင်းကြပေပြီ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများကလည်း လူဒကာများ သိလိမ့်နိုးနိုး၊ လူဒကာများကလည်း ဘုန်းတော်ကြီးများ တတ်လိမ့်နိုးနိုးဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး “ နိုးနိုး “ ဖြင့် စခန်းသွားနေကြသော်လည်း တချို့နေရာများတွင်မူ ဘုန်းကြီးကလည်း မတတ်၊ လူကလည်း မသိဘဲ အစဉ်အလာ အရသာ ဝါးချသွားတတ်သဖြင့် ယနေ့ သိပ္ပံခေတ်နှင့် ဘာသာရေးသည် ဝိရောဓိ ဖြစ်လာရပေရာ ဤအချက်ကို “ သာသနာတော်ကို မြတ်နိုးပါသည် “ ဆိုသူတိုင်း ကြီးမားစွာ သတိထားသင့်ပေပြီ။
ကိုးကား ။ ။ ဝီကီးပီးဒီးယား